Blog - Ahoana no fanadiovana ny volomaso diso? Fomba voalohany!
Ataovy madio hatrany ny kapoka famoahana anao ary maharitra elaela indrindra!
Nahoana isika no tokony hanadio ny volomaso diso?
Volomaso sandoka indraindray dia mety ho lafo tokoa, koa mety azonao atao ny mampiasa azy io mihoatra ny indray mandeha. Raha ny momba ny volomaso Felvik False, matetika dia afaka mampiasa hatramin'ny 20-25 fotoana izy raha misy fikirakirana mety. Raha te hampiasa indray ny kapoka ianao dia manana safidy isan-karazany. Azonao atao ny manadio ny kapoka amin'ny lamba landihazo na Q-tip. Azonao atao ihany koa ny mampiasa tweezers sy fitoeram-plastika feno remover makiazy mba hanadiovana tsimoramora ireo kapoka. Rehefa vita ianao dia arovy soa aman-tsara any amin'ny toerana mangatsiaka sy maina na fitoeran-drano ireo kapoka sandoka.
Ahoana ny fomba fanadiovana ny volomaso diso?
Dingana 1: Omano ny fitaovanao
Alohan'ny hanombohanao manadio ny volomaso diso, angony ny fitaovana hanaovana izany. Raha te hanao azy tsara sy mahomby dia mila ireto zavatra manaraka ireto ianao:
Remover makiazy, natao manokana hanalana ny makiazy amin'ny maso
Voahosotra landihazo / Q-tendrony
Mampiasà fitoeran-javatra plastika
Dingana 2: sasao ny tananao
Hanombohana azy dia sasao amin'ny rano madio sy savony misy bakteria ny tananao. Tena ilaina ny mifikitra amin'ity dingana ity ary mitazona ny fahadiovan'ny tanantsika. Tsy te hitantana volomaso sandoka amin'ny tanana maloto ianao, satria mety hiteraka areti-maso izany ary mety ho tena matotra.
Ataovy lena ny tananao amin'ny rano mandeha sy mazava. Atsofohy amin'ny savony misy bakteria mandritra ny 20 segondra ny tananao. Hamarino tsara fa mikendry faritra toy ny eo anelanelan'ny rantsantanana, ny lamosin'ny tananao, ary eo ambanin'ny rantsan-tànana.
Sasao amin'ny rano madio ny tananao ary avy eo maina amin'ny servieta madio.
Dingana 3: esory ny kapoka sandoka.
Asio remover makiazy eo ambonin'ny volomaso mba hanesorana ny lakaoly. Tsindrio miaraka amin'ny rantsan-tanananao ny sarony, ary atsangano moramora amin'ilay volomaso ilay volomaso. Ampiasao eo ambonin'ireo rantsan-tananao ny lamban'ny rantsan-tànanao na tweezers.
Tano mafy amin'ny ankihiben-tànanao sy ny rantsan-tànanao ny volomaso.
Peel moramora ao anatiny ny tarika. Tokony hivoaka mora foana ny kapoka.
Aza mampiasa fanafody fanaingoana miorina amin'ny solika rehefa manao volomaso diso.
Dingana 4: Ahosory baolina landihazo amin'ny remover makiazy (na ny Remover eyvash de Felvik) ary ahosory amin'ny famafazana sandoka.
Makà baolina landihazo. Atsofohy amin'ny remover makiazy na Remover Felvik Eyelash Remover. Afindra ny fehikibo manaraka ireo kapoka sandoka amin'ny fihetsehana malefaka. Mihazakazaha ny fehin-kibo avy eo amin'ny tendron'ny karavasy ka hatrany amin'ny faran'ny famafazana, alao antoka fa ho azonao ihany koa ilay tady fametahana. Tohizo mandra-pahafatin'ny makiazy sy ny lakaoly rehetra.
Dingana 5: Avereno amin'ny lafiny mifanohitra amin'ny kapoka.
Avadiho ny volomaso sandoka. Makà savony landihazo vaovao ary atsofohy ao anaty remover makiazy na Felvik False Eyelash Remover. Avy eo, avereno ny dingan'ny famindrana ny sakamalaho amin'ny sisin'ny volomaso. Miverena indray avy eo an-tampon'ny fehy mankany amin'ny tendrony. Hamarino tsara fafao ny fehin-kibo miaraka amin'ilay fatorana adhesive. Hamarino tsara fa nesorina daholo ny makiazy.
Dingana 6: Mampiasà tweezers hanalana lakaoly.
Matetika dia misy lakaoly mipetaka amin'ny fehikibo. Azonao atao ny mampiasa tweezers hanesorana azy.
Diniho ny famaohana ny lakaoly sisa tavela. Raha mahita lakaoly ianao dia raiso ny tweezers anao. Amin'ny tanana iray, esory ny lakaoly amin'ny tweezers. Etsy ankilany, tazomy amin'ny volon-tananao ny volomaso.
Hamarino tsara fa tsy mila misintona afa-tsy amin'ny tweezers ianao. Ny fisintomana ny kapoka dia mety hanimba ny volomaso sandoka.
Dingana 7: atsobohy ny fehin-kibo vita amin'ny landihazo vaovao amin'ny fikosehana alikaola ary hamafana ny fehin-kibo.
Te ho azo antoka ianao fa mahazo lakaoly na makiazy sisa tavela amin'ilay fehiloha. Atsofohy amin'ny alikaola manosotra ny fonosanao landihazo ary esory amin'ny fehiloha. Ho fanampin'ny fanesorana ny lakaoly, ity dia manaparitaka ny tsipika mba hahafahanao mampiasa soa indray ny volomaso avy eo.